Amin'ny ankamaroan'ny operating rafitra mifototra amin'ny Unix, ny fandaharam-potoana sal mampiseho ny dingana izay amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka. Mifandray amin'ny fitaovana ny Unix, ny ambony, ny fanehoam-tena-ny fotoana ny vaovao momba ny fitantanana ny dingana.
Ny baiko sal dia mitovy ny didy tasklist ny Microsoft Windows. Amin'ny Windows PowerShell, ps dia ny sarin-antsoina ho amin'ny cmdlet Get-Dingana, izay efa toy izany koa ny asa.
PID TTY FOTOANA CMD
Ny mpampiasa dia afaka ihany koa ny mampiasa ny baiko sal miaraka amin'ny baiko grep mba mahita vaovao ho an'ny dingana manokana, toy ny fehezan-dalàna ny dingana (dingana id). Ohatra:
# ps - | grep firefox-bin
Maneho ny dingana tsirairay izay nihazakazaka amin'ny maha-faka (mivantana na an-kolaka) amin ' ny fomba mba haneho ny mpampiasa:
# ps -U faka -u-paka u
MPAMPIASA PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME BAIKO
faka 1 0.0 0.0 10348 640 ? Ss 2009 0:06 init 
Safidy[hanova | hanova ny fango]
Ny ps efa maro ny safidy. Ao amin'ny rafitra fanohanana ny fitsipika SUS sy POSIX, ny sal matetika mitantana ny safidy -ef, izay "-e" mifidy rehetra ("etena") dingana sy ny "-t" dia midika hoe feno ("full") tarehy output. Hafa mahazatra ny safidy dia ny -l, izay mamaritra ny fotoana maharitra ("long") tarehy.
Tena rafitra homarinana avy amin'ny BSD tsy manaiky ny safidy ny fitsipika SUS sy POSIX noho ny ady manan-tantara ho an'ny antony (ohatra, ny safidy "e" na ny "-y" dia maneho ny tontolo iainana variables). Ao ireo rafitra, sal matetika mitantana ny fitsipika tsy safidy aux, miaraka amin'ny "a" mba haneho ny lisitry ny dingana rehetra ao amin'ny terminal (anisan'izany ny mpampiasa hafa), ny "x" mba haneho amin'ny dingana rehetra raha tsy misy ny terminal ny fanaraha-maso, ary ny "u" manampy ny andry miaraka amin'ny mpampiasa mifehy ny dingana tsirairay. Ho ambony indrindra fifanarahana rehefa mampiasa ity ny syntaxe, dia tsy misy "-" eo anoloan'ny "aux". Koa dia afaka mampitombo 'ww' rehefa aux, toy ny "sal auxww" ho feno vaovao momba ny dingana tsirairay, anisan'izany ny masontsivana.
Lisitry ny fitaovana ny Unix
ps — Famaritana avy amin'ny Tokan-tena Unix Famaritana (English)
Ny baiko sal mampiseho ny dingana rehetra mandeha amin'ny Linux (English)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ps_(Unix)&oldid=795136"
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2017 amin'ny 18:36 ity pejy ity.